Pomar de Valdivia, Castilla y León, i-Spain
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Gema
Indlu yabantu abangu-2/3 enengadi nokoso inyama etholakala edolobheni elinokuthula eliqhele ngamakhilomitha angu-8 ukusuka e-Aguilar de Campoo, eGeopark yaseLas Loras. Inegumbi lokuphumula, amagumbi amabili okulala, igumbi lokugezela eliphelele, indlu yangasese enomshini wokuwasha kanye nekhishi elinezinto zonke.
Kuhle ukuphumula, vakashela ezokuvakasha zemvelo noma uvakashele i-Romanesque of Palencia.
Izinja zivunyelwe. Intengo ngokuhlala kwenja ngayinye ngama-euro angama-20 esewonke, okumele akhokhwe emnyango. Khumbula ukuletha izingubo zokulala nemibhede ukuze kube ntofontofo nefenisha ivikeleke.
Indlu yethu iye yalungiswa ngothando futhi ihlose ukuba indawo ethokomele yokuphumula nokunethezeka phakathi nempelasonto noma iholide. Siyihlomise ngayo yonke leyo mininingwane esikholwa ukuthi iyadingeka ukuze izivakashi zizizwe zisekhaya. Inhlanzeko ibaluleke kakhulu ukuze uzizwe ukhululekile endaweni yokuhlala, yingakho siqikelela kakhulu. Ukuze isivakashi ngasinye sibe nomuzwa wokuthi indlu yintsha sha.
4.65(79 okushiwo abanye)
Indlu isendaweni ethule enezindawo eziningi zokuhamba eziseduze ukuze ujabulele imvelo kanye namahlathi ahlala endaweni.
Siyajabula ukusiza izivakashi ngesikhathi sokuhlala kwazo. Singancoma izindawo ongavakashela kuzo, ukuhamba ngezinyawo okuhambisana nezidingo kanye nokumelana nokunye.
UGema Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: VuT 34 30